एसिड पीडित मुस्कानको माग – दोषीलाई फाँसी होस्, घण्टाघरमा झुण्ड्याएर मारियोस् ! – नेपाली सूर्य
एसिड पीडित मुस्कानको माग – दोषीलाई फाँसी होस्, घण्टाघरमा झुण्ड्याएर मारियोस् !
September 12, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on एसिड पीडित मुस्कानको माग – दोषीलाई फाँसी होस्, घण्टाघरमा झुण्ड्याएर मारियोस् !
काठमाडौं। आफूमाथि ए’सिड प्र’हार गर्ने दो’षीलाई फाँ’सीको सजाय दिन मुस्कान खातुनले माग गरेकी छिन्। शुक्रबार वीरगञ्जको छप्कैयामा स्कुल जाने क्रममा १५ वर्षीय मुस्कानमाथि ए’सिड प्रहार भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडाैं अा एकी उनले दाे’षीलाइ कडा कार्वाहीकाे माग गरेकी हुन । शनिबार मुस्कानले भनिन ‘दो’षीलाई फाँ’सी होस।
नारायणी अस्पतालबाट थप उपचारका लागि शुक्रबार नै राजधानीको कीर्तिपुर स्थित बन अस्पतालमा भर्ना गरिएकी उनले एक अनलाइन सँगकाे कुराकानीमा यस्ताे बताएकी हुन । उनलाई सोही गाउँमा बस्ने समसाद आलमले ए’सिड प्र’हार गरेका थिए। उनले शनि बार आफूलाई जस्तो अरु कसैलाई हुन नदिन दो’षीलाई फाँ’सी हुनुपर्ने बताएकी हुन ।
ए’सिड प्र’हार गर्नुअघि मुस्कानलाई आफूतर्फ हेर्न आग्रह गरेको तर मुस्कानले नमाने पछि ए’सिड प्र’हार गरिएको बताइएकाे छ । रेशम कोठी स्थित त्रिभुवन उच्च माविमा ९ कक्षामा अध्ययनरत मु’स्कान बिहान ६ बजे स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा समसाद आलमले ए’सिड प्र’हार गरेका थिए। अनुहार तर्फ फ्याँकेको ए’सिड हातले रोक्दा मुस्कानको दायाँ हातको भाग जलेको छ। उनको छाती पनि जलेको छ।
मुस्कानकी आमा सहनाज खातुन अन्सारीले पनि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्यवाही गर्न माग गरेकी छिन । ए’सिड प्र’हार गर्ने माबिदसहित दुबै जनालाई प्रहरीले शुक्रबार नै समातेको छ। मुस्कानका बुबा रसुलले इदभन्दा अगाडि आफ्नो छोरीलाई जि*स्काए पछि आफूले हप्का*एको जानकारी दिए। उनले भने, ‘ए*सिड प्र*हार गर्ने केटासँग हातमा ढुंगा पनि थियो।
पहिले टाउकोमा हा*नेर बे*होस गर्ने र त्यसपछि अनुहारभरी ए*सिड हा*ल्ने योजना रहेछ। तर, मान्छेहरूको भी*ड भएको हुनाले उसले त्यसो गर्न सकेन ।’ए*सिड प्र*हार गर्नुअघि मुस्कानलाई आफूतर्फ हेर्न आग्रह गरेको तर मुस्कानले नमानेपछि ए*सिड प्र*हार गरिएको थियो । अनुहार तर्फ फ्याँ*केको ए*सिड हातले रो*क्दा मुस्कानको दायाँ हातको भाग ज*लेको छ। उनको छा*ती पनि ज*लेको छ ।
उनले हिजोदेखि जुस मात्र पिएकी छिन् । मुस्कानलाई कीर्तिपुरको बन अस्पतालको के*भिन नम्बर ५ मा राखिएको छ । मुस्कानले आफूलाई अनुहारमा घ*मण्ड नगर्न पहिले देखि ध*म्की दिने गरेको बताइन् । ‘मलाई भन्थ्यो–त आफ्नो चेहरामा घ*मण्ड गर्छस् भने चेहरा ख*तम गरिदिन्छु,’ मुस्कानले भनिन्। मुस्कानकी आमा सहनाज खातुन अन्सारीले पनि दो*षीलाई कडा भन्दा कडा का*र्यवाही होस् भन्ने माग राखेकी छिन्।
आइफोन ११ को ट्रिपल क्यामेरामा खास के छ ?
मुटुमा प्वाल परेका राजेशलाई आर्थिक सहयोग
प्रदेश १ का संसद कुशुम श्रेष्ठलाई कारोना संक्रमण पुष्टि
August 12, 2020 Nepali Surya
January 18, 2021 Nepali Surya
अरिङ्गालले टोकेपछि अस्पतालबाटै जीवन माग्दै विनिता, छोरीलाई अस्पताल लिएर गएका बाबुलाई नै लाग्यो “डेंगु”
September 15, 2019 Nepali Surya